स्वस्तिमाको S-turn | NAJ Entertainment
नेपाली फिल्मनगरीमा स्वस्तिमा खड्का चर्चित नाम हो। उनी प्रियंकाले जस्तो जथाभावी फिल्म खेल्दिन्नन्, नपाएर पनि हुनसक्छ। न त उनी बजारमा ठुलै गसिप हुने गरि पब्लिसिटी स्टन्ट मार्छिन् । तर पनि फिल्म हेर्ने दर्शकहरु बिच उनको चर्चा परिचर्चा भने भैरहन्छ। निर्देशक/कलाकार निश्चल बस्नेतको श्रीमती हुनु बाहेक उनीसङ्ग फिल्म नगरीमा टिकिरहन अन्य प्रभावकारी पृष्ठभुमि देखिएको छैन। त्यसो त किन स्वस्तिमा दर्शकको मनमनमा बस्न सफल छिन् होला? निर्माताहरु स्वस्तिमामा कस्तो जबर्जस्त प्रतिभा देखेर लगानी गर्न तम्सिन्छन् होला?
ठूलो पर्दामा टिक्न जोकोहीले पनि संघर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ। भारतीय नायिका अनन्या पान्डेहरुले सुनाउने गरेका संघर्षका किस्साहरुले जोकोही फिल्म लाइनमा छिर्न सक्दैन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। स्वस्तिमाको चलचित्र यात्रा कसरी शुरु भयो? परिवेश मिलेछ भने यो बारेमा अरु कुनै दिन बहस गरौला। तर स्वस्तिमा फिल्मनगरीमा टिकिरहन के गरिराखेकी छिन् त? शिर्षकमा उल्लेख भए झै पंक्तिकारको बिचारमा ठूलो पर्दामा टिकिरहन स्वस्तिमाले हालसालै S-Turn मारेकी छिन् !
एउटी नायिका छिन कलिबुडमा जो आफुलाई निकै संस्कारी भएको भन्ने घोषणा गर्थिन्। चलचित्र क्षेत्रमा छिरेको धेरै समयसम्म आँचल कुर्ता सलवार र पूरा शरीर ढाक्ने पहिरनमा देखिन्थिन्। तर यो टिकटक जेनेरेसनमा उनलाई आफू ठिकठाक भएजसो लागेन होला, छोटा पहिरन अङ्गाल्न पुगिन्। उनले लगाएको छोटो कट्टुमा खोट छ भन्न खोजेको पक्कै होइन, उनमा परिवर्तन आउनुको कारण के होला भनेर आंकलन गरेको हो।
यहि चलचित्र क्षेत्रमा केही अनुहारहरु देखिए, अनुहार सङ्गसङ्गै अङ्गहरु पनि देखिए। चर्चाको भोकले, पैसाको लालचले सुष्मा कार्की, स्मिता थापाहरु निकै हदसम्म नाङ्गिए पनि। भलै उनीहरुले महिला सशक्तीकरण नामको सङ्ग्लो पानी धमिल्याए पनि । उतिबेलाको मिठो जवानीको ह्याङ्गओभर अहिले उनीहरुको करियर धरापले देखाएको छ। ५ मिनेट उध्रेको चोली फट्फटाएको लाखौ लिन्छु भन्नेहरु अहिले कुन क्लबमा कुन देशको राजासङ्ग फोटो खिचाइरहेका होलान्, मिडियालाई थाहा छैन। संयमित भएर कदम चाल्दा प्रियंका कार्कीहरु अझै फिल्म क्षेत्रमा टिकिरहेका छन्, यानकी दर्शकहरुले बुढेसकालमा छिर्नै लागेका रिचा शर्मा, प्रियंका कार्कीहरुबाट अझै धेरै हेर्न बाकी छ भन्ठानेका होलान् भन्ने सोचाई निर्माताद्वयमा छ।
कठिन प्रतिस्पर्धाका बिच पहिलो नम्बरमा पुग्न कसलाई मन पर्दैन र? स्वस्तिमा पनि यति दौडमा छिन् । यहि दौडमा अघि बढ्न स्वस्तिमाले आफुमा परिवर्तन ल्याएकी छिन्। उनको यो परिवर्तनलाई यो लेखमा S-turn ले सम्बोधन गरिएको छ। के हो त स्वस्तिमाको S-turn ?
एक बिबाहित नारीलाई मनोरन्जन क्षेत्रमा काम गर्न निकै कठिन हुन्छ। जसरी कलिला मोडलहरु यो क्षेत्रमा छिर्ने बित्तिकै बोल्ड अवतार पेश गर्छन्, त्यसरी अघि बढ्नु बिबाहित अभिनेत्रीको लागि पारिवारिक कारणले चुनौती बन्न पुग्छ। सबैमा यो लागू नहुन पनि सक्छ। विदेशी अश्लील चलचित्रहरुमा लोग्ने-स्वास्नी नै अभिनय गरिरहेका पनि हुन्छन्, कहिलेकाही र अन-स्कृन पार्ट्नर बदलेर पनि। नेपालजस्तो सामाजिक ब्यबस्थाले त्यो स्वीकार्दैन। स्वस्तिमालाई यो तथ्य राम्ररी थाहा छ। साथमा उनमा दर्शकको मनमस्तिष्कमा बस्ने चाह पनि छ। यहि कारणले उनी परिवर्तित हुँदै गईरहेकी छिन्। उनले “कोकोकोलाको लागि खिचाएको बिज्ञापन”को बिज्ञापन गर्न सामाजिक सन्जालमा राखेकी यो तस्बीर हेर्नुहोस्।
केही बिचारधाराले “सफ्ट पोर्न”को रुपमा परिभाषित गरेको परिदृश्य यो तस्बीरमा देखिन्छ। स्वस्तिमा हातमा ब्लाक कोक समातिराखेकी छिन्। उनको जिब्रो हेर्दा उनी त्यो बस्तुलाई चाट्न गइरहेकी छिन् । अहिलेको VPN generation लाई यो भन्दा बढी भनिराख्न पर्दैन होला, बाहिरी रुपमा कोकको बिज्ञापन भनिए पनि दर्शकहरुलाई यो तस्बीर मार्फत कसरी आकर्षित गर्न खोजिदैछ भनेर। फलोवरहरु कतै नभागुन् भनेर तस्बीर हेर्नेहरुको मानसिकतामा यौनको मन्दविष छर्न यस्ता सन्दर्भ सहितका दृष्यहरु निकै उपयोगी मानिन्छन्।
अर्को तस्बीर हेरौ जुन स्वस्तिमाले बिबाह वार्षिकीको अवसरमा सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक गरेकी छिन्। माथिल्लो तस्बीरमा गरिएको व्याख्या बुझ्नु भएको छ भने यो तस्बीरको बारेमा सायद भनिराख्न पर्दैन, स्वस्तिमा निश्चलसङ्ग कस्तो पोजमा रमाइरहेको दृश्य सार्वजनिक गरियो ? हुनसक्छ यी तस्बीरहरु दर्शकलाई यौणिक रुपमा आकर्षित गर्ने हेतुका साथ राखिएका होइनन्! तर मनोरन्जन क्षेत्रको संघर्ष, नेपालको सामाजिक अवस्था,पारिवारिक बन्धन सबैलाई सन्तुलनमा राख्न यस्ता “S-turn” का तिकडमहरु प्रयोग गरिनसक्छन्।